Mpanamboatra sy mpamatsy Rotary i Waveguide Rotary | AOOD
Ny tonon-taolana mihodina Waveguide dia mamela ny fifindran'ny mikraoba avy amin'ny sehatra mijanona mankany amin'ny mpiambina ondratra mahitsizoro 360˚, ny avo indrindra hatramin'ny 94Ghz. Izy ireo dia afaka mitantana herinaratra lehibe kokoa ary manana fihenam-bidy kely kokoa noho ny tonon-taolana rotary coaxial, indrindra aorian'ny fihoaram-pefy iray, ny tombony roa dia ny tonon-taolana rotguide dia miharihary tokoa. AOOD dia manome singa mpiambina onjam-peo tokana sy fitambaran'ireo vondrona mpiambina onja sy coaxial. Ireo singa ireo dia azo ampiasaina amin'ny peratra slip elektrika mba hanomezana mpiambina onja, hery coaxial ary fampitana data. Ny fampiharana mahazatra dia misy ny rafitra radar, satelite ary antena finday sns.
Model Isan'ny fantsona Haavo matetika Hery farany OD x L (mm)
ADSR-RW01 1 13,75 - 14,5 GHz 5.0 kW 46 x 64
Previous: Ny fivarotana mora indrindra amin'ny vidin'ny peratra misy tombo-kase voaisy tombo-kase - Rantsan-tànana amin'ny kapsily miaramila - AOOD
Manaraka: Kavina fitetezana miaramila Aerospace